Izikhwama Zenkunkuma – Cleaning Hub Centurion.Your Cleaning Supplies Company.
<transcy>Izikhwama Zenkunkuma Yokuhlala</transcy>
Thenga izikhwama zikadoti, izikhwama zikadoti, izikhwama ze-wheelie bin kanye nama-pedal bin liners konke ngamanani ashibhile.
Uhla lwethu lwezikhwama zokulahla udoti nezinsimbi zemigqomo esetshenziselwa ukunweba lusukela kuma-micron angama-20 laya kuma-micron ama-micron amakhulu angama-40.
Izikhwama zikadoti zitholakala ngomusi obala ocacile, omnyama, obomvu, oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza okotshani, ophuzi noma osobala, kuyilapho ama-pedal bin liners kanye nama-sanitary bin liners atholakala kumastadi (okusobala okuncane) noma obomvu futhi kumnyama.
Izikhwama ze-Wheelie bin zinamandla amakhulu ama-micron angama-30 atholakala ngombala oluhlaza noma omnyama.
Bheka ukusetshenziswa okumangazayo kwezikhwama zikadoti https://www.cleaninghub.co.za/blogs/fun-but-useful-stuff/the-ultimate-big-black-bag
From R 25.30
Clear/Smokey Refuse Bags
Coloured Refuse Bags 40 Micron
From R 59.10